ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆေးပညာနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ဆေးခန်း - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆေးပညာနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ဆေးခန်း
၆၆ (၀) ၂၇၁၁-၈၃၉၉-၈၄၀၀
အရည်အသွေးမြင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဌာနအတွက် နိုင်ငံတကာက အသိအမှတ်ပြုခံထားရတဲ့ Bangkok ရဲ့ Samitivej ဆေးရုံကြီးမှာ ရောဂါဝေဒနာအမျိုးမျိုး ခံစားနေကြရတဲ့ လူနာတွေကို ကုသမှုပေးလျှက်ရှိပါတယ်။ အားကစားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာများအတွက် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးများ စီမံပေးခြင်းအပြင် ခက်ခဲတဲ့ခွဲစိတ်ကုသမှုတွေကနေ ဆေးဝါးသုံးပြီး ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအစီအစဉ်တွေမှာ အကူအညီပေးဖို့အထိ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူနာတွေ သူတို့ခြေထောက်ပေါ် သူတို့ ပြန်ရပ်နိုင်လောက်တဲ့အထိ အကူအညီတွေ ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ချို့တစ်ချို့သော ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူနာတွေဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာ အားနည်းနေစေမယ့် နာတာရှည်ရောဂါ ခံစားထားရပြီး တစ်ချို့ကတော့ ရုတ်တရက် ပြောင်းလဲမှုတွေရဲ့ သားကောင်တွေပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရည်မှန်းချက်က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူနာတွေကို ဘဝရဲ့ သာယာမှုတွေ ပြန်ရပြီး ယခင်က နေသားကျနေတဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပြန်ရအောင် အစဉ်အမြဲကူညီဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုဖြစ်ဖို့အတွက် Samitivej Sukhumvit ဆေးရုံကြီး နဲ့ Samitivej Srinakarin ဆေးရုံကြီး နှစ်ရုံလုံးက ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆေးပညာနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ဆေးခန်းတွေမှာ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုကို ပေးဖို့အတွက် ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ သမားတော်ကြီးများ၊ ရုပ်ပိုင်ဆိုင်ရာ ကုထုံးပညာရှင်များ၊ လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ကုထုံးပညာရှင်များ၊ အနှိပ်ကုထုံး ပညာရှင်များ၊ ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်း အစားထိုးပညာရှင်များနဲ့ စကားပြောကုထုံးပညာရှင်များကို ခေါ်ယူခန့်အပ်ထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူနာတွေ ပြန်လည်ကျန်းမာလာရေးကို အရှိန်မြှင့်ပေးဖို့ နောက်ဆုံးပေါ် အဆောက်အဦးနဲ့ ပစ္စည်းကိရိယာတွေကို ပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်။ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုတာ တစ်ခါတစ်လေ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ အချိန်ပေးရနိုင်တာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ နားလည်ထားတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူနာတွေကို စိတ်ရောကိုယ်ပါ ဂရုစိုက်ပေးရမယ် ဆိုတာကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ လူကြီးမင်းရဲ့ လမ်းကြောင်းမှာ ခြေတစ်လှမ်းတိုင်းစီအတွက် အထောက်အပံ့ပေးဖို့ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ ရှိပါတယ်။
အရိုးအဆစ်ရောဂါ ဝေဒနာရှင် လူနာများအတွက် ရောဂါရှာဖွေခြင်း နှင့် ကုသခြင်း
ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်း အစားထိုးခြင်းဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ
လူနာများနှင့် ဆွေမျိုးများအတွက် စိတ်ပညာရှင်များနှင့် ဆွေးနွေးပေးခြင်း
အာရုံကြောကြွက်သားဆိုင်ရာရောဂါများ (neuromuscular diseases) ခံစားနေရသော လူနာများအတွက် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများ
အဆုတ်ရောဂါများ ခံစားနေရသော လူနာများအတွက် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများ
နာတာရှည်နှလုံးရောဂါများ ခံစားနေရသော လူနာများအတွက် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများ
မီးယပ်ရောဂါဆိုင်ရာ အခြေအနေများဖြစ်ပေါ် ခံစားနေရသော လူနာများအတွက် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများ
ပစ္စည်းကိရိယာ အပြည့်အစုံတပ်ဆင်ထားသော စမ်းသပ်ခန်းများ
အထူး ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကုထုံးအခန်းနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ကုထုံးခန်း
အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများရှိတဲ့ လူနာတွေအတွက် ရောဂါပြန့်ပွားမှုကို ကာကွယ်ရန် ပစ္စည်းကိရိယာ အပြည့်အစုံတပ်ဆင်ထားသော ရင်ခေါင်းဆိုင်ရာ ရူပကုထုံး (CPT) သီးသန့်ခန်း
လမ်းလျှောက်စက်ခါးပတ်နှင့် အငြိမ်စက်ဘီးလေ့ကျင့်စက်များနှင့်တကွ အခြားအမျိုးမျိုးသော ရုပ်ပိုင်းဆိ်ုင်ရာကြံ့ခိုင်မှုကို စစ်ဆေးသော ပစ္စည်းကိရိယာများ
ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပမှ အသံလှိုင်းဖြင့် ကုသပေးသောစက်
အဆင့်မြင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် စက်များ
အာရုံကြောများ၏ လှုံ့ဆော်မှုကို အကဲဖြတ်ရန် ကြွက်သားများ၏ လျှပ်စစ်စွမ်းရည်တိုင်းတာစက် (EMG)
အိပ်ယာပေါ်တွင် အချိန်ကြာမြင့်စွာ လှဲလျှောင်းနေရသော လူနာတွေအတွက် ဖိအားကို ချိန်ညှိမျှတပေးရန်နှင့် အလေးချိန်ပြောင်းလဲသည့် အလေ့အကျင့်ကို ရစေရန် ချိန်ညှိနှိုင်သော အိပ်ယာ
အထွေထွေ တီဗွီဓါတ်မှန်စက်နှင့် နာကျင်မှုကို သက်သာစေရန်အတွက် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသော အသံလွန်လှိုင်းစက်
လှိုင်းတိုသုံး လျှပ်စစ်ဓါတ်အားဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်အပူဓါတ်ထွက်စေသော ကိရိယာများ
လည်ပင်းနှင့် နောက်ကြောအလေးဆွဲပစ္စည်း ကိရိယာများ
Rehabilitation Center 2nd Floor
နေ့စဉ် (တစ်ပတ်လျှင် ၇ ရက်) - ၀၈:၀၀ - ၂၀:၀၀
၆၆ (၀) ၂၃၇၈-၉၀၈၇
တနင်္လာ-သောကြာ ၀၈.၀၀-၁၉.၀၀၊ စနေ နှင့် တနင်္ဂနွေ ၀၉.၀၀-၁၆.၀၀
၆၆ (၀) ၃၈၃၂-၀၃၀၀ လိုင်းခွဲ ၁၄၀၁
နေ့စဉ် (တစ်ပတ်လျှင် ၇ ရက်) - ၀၇:၀၀ - ၁၉:၀၀
၆၆ (၀) ၂၄၃၈-၉၀၀၀ လိုင်းခွဲ ၃၈၀၀, ၃၈၀၁
Monday-Friday 08.00-20.00, Saturday and Sunday 08.00-18.00
66 (0) 33-038-816
Assist. Prof. Dr. Patama Promsonthi, M.D.
Unchaleerut Kaikaew, M.D.
Donlaya Prasathaporn, M.D.
Tarinee Rojsakulkij, M.D.
Dusit Nimmaanrat, M.D.
Nantawan Thamwarakul, M.D.
Pornpan Mahasawapakul, M.D.
Supasid Jirawatnotai, M.D.
Tipvapa Banglap, M.D.
Nuttasin Sirimittrakoon, M.D.